Ngomso kupapashwa "Namhlanje kubi, kodwa ngomso yeyam" nguCompán | Uncwadi lwangoku
ISalvador Compán kunye no Inqaku lomhleli uEpasa usinika ngomso ukupapashwa kwencwadi yakhe entsha "Namhlanje kubi, kodwa ngomso yeyam", inoveli iseti kwii-60s. Libali loxinano oluphezulu kunye nesityebi kokubhala kunye nokubonakalisa okwedlule. Ihlalutya ubomi babalinganiswa nobudlelwane bosapho kunye nobunzima obuninzi beemvakalelo, ibalisa yonke into incasa enkulu yokubhala.
1 Isishwankathelo esisemthethweni
3 Imixholo egutyungelwe kwinoveli
UDaza, uJaen, amashumi amathandathu: utitshala wokuzoba uVidal Lamarca, ulilolo kunye nehemmetic, yindoda ethi, okoko yaphela imfazwe, ithwele ubunzima obunganyamezelekiyo bokungcatshwa. Kude kube, ngokungalindelekanga, ukuhamba okufiphala kweentsuku, okubangelwa kukukruquka kunye netyala, kuyawa ngaphandle kokuphazamiseka ebomini bakhe eRosa, umfazi ontsonkothileyo notyhafileyo. I-Clandestine kunye nothando, ukuthandana phakathi kweVidal kunye neRosa kuya kuba yinto eya kususa eyadlulayo, kude kube lelo xesha, kubonakala ngathi ayinakushukunyiswa.
KwiPablo Suances, umntwana ofikisayo ongenaxhala kwaye ongazinzanga, idolophu iqala ukuba ncinane kakhulu kuye, nangona ehlala ngentshiseko kwiiklasi zokuzoba azifumana kuVidal Lamarca. Abafundi bakaVidal ikwaRaúl Colón, umhlobo ka
Pablo, kunye nomama wakhe Rosa Teba, umfazi ovela emantla, onesithukuthezi esingapheliyo eDaza, kunye noVidal oqala idyll. UPablo, ingqina elingalindelekanga lale nto yokuthandana kukrexezayo, uqala ukulazi ilizwe labadala bakhe, egcwele iimfihlakalo kunye netyala elihlala likhona kubomi bephondo de bakhokelele kwinto engaqhelekanga
Izenzo zobundlobongela okanye ubungqina obufunekayo obufunekayo bufunwe kumashumi amathathu eminyaka edlulileyo.
Le noveli ibekwe kwidolophu yokucinga yaseJaén, eDaza, isifinyezo esiqanjwe ngamagama u-Úbeda kunye noBaeza kwaye, ngenxa yoko, kwindawo ebalisayo ethi ibe kukudibana ngokwasemzimbeni kwazo zombini (iindawo ezimbini ezisondeleyo ezinokuba sisixeko esinye Ibipolar). Kwenzeka phakathi kowe-1936, ekuqaleni kweMfazwe yamakhaya, nango-1966, unyaka apho kwenziwa khona inzame zokubhiyozela ukungaphumeleli ngokupheleleyo ku-Antonio Machado edolophini.
Abalinganiswa esiza kubona kule ncwadi zezi zilandelayo:
UPablo Suances: Umbalisi weli bali.
UVidal Lamarca: Umlinganiswa ovela kwasekuqaleni kuye esiphelweni senoveli.
URosa Teba: Uziva ngathi uhlala evaliwe kwihlabathi elingelilo elakhe.
Sebastian Lanza: UnguFalangist oza kuvusa izulu nomhlaba ukuze uVidal aphume kwintolongo yaseValencia.
Njengomdla, siya kubona isimilo sika-Antonio Machado (phakathi kwabanye) esenziwe ngumbhali uSalvador Compán.
Imixholo egutyungelwe kwinoveli
Le noveli ityebileyo ijongene nezihloko ezinje ukukrexeza, la imfazwe nozwilakhe ngasemva, i zobungqingili okanye inkanuko yesini yolutsha, phakathi kwezinye ezininzi.
KuSalvador Compán, "Namhlanje kubi, kodwa ngomso yeyam" yinoveli yakhe yesixhenxe epapashiweyo. Sikunqwenelela amathamsanqa ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Ngomso kupapashwa "Namhlanje kubi, kodwa ngomso ngowam" nguSalvador Compán